Afar arrimood oo caqabad ku noqon kara wadahadallada doorashada (Warbixin) - Awdinle Online
Afar arrimood oo caqabad ku noqon kara wadahadallada doorashada (Warbixin)
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shir wadatashi ah oo u dhexeeya madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada kaas oo looga hadlayay dib u dhaca doorashooyinka qaranka .
Madaxda Maamul Goboleedyada ayaa ku sugan Muqdisho iyadoo maalintii lasoo gabagabeeyay shirka, waxaana shirka laisku soo laaban doonaa berri oo Axad ah.
Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo shir gudoominayay kulanka maanta ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in wadahadallada ay guuleystaan.
Rooble iyo madaxda dowlad goboleedyada waxay isku dayi doonaan inay soo afjaraan ismari-waagii jiitamayay ee hannaanka doorashada dalka.
Nidaamka federaalka ee Soomaaliya waxaa loo aasaasay si loo soo afjaro khilaafaadka daba dheeraaday ee u dhexeeya qabaa’ilka, kaasoo hor istaagay isku daygii lagu dhisi lahaa dowlad mideysan. Arrintan ayaa gogol xaadh u ahayd dib-u-dhiska gaabiska ah ee hay’adda amniga qaranka, in kasta oo weli ay wax badani kala daansan yihiin.
Hay’adaha maaliyadeed ayaa sidoo kale dib loo unkay iyadoo dalku doonayo inuu dib ula macaamilo hay’adaha dhaqaale ee adduunka, 30 sano ka dib oo saaxaddaasi ka maqnaa.
Ismari waaga doorashada ayaa cirka is kusii shareeray kaddib xiisadda daba dheeraatay ee u dhaxeysay dowlada dhexe iyo qaar kamid ah dowlad goboleedyada.Bishii Sebtember 2018, madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed ee dalka ayaa ku dhawaaqay in ay joojinayaan dhammaan wadashaqeyntii kala dhaxeysay dowladda federaalka khilaaf salka ku haya awoodda iyo wadaagga kheyraadka.
Madaxweyne Farmaajo oo taa ka jawaabaya ayaa xididdada u siibay qaar ka mid ah madaxdii maaamulladaas, isaga oo ka shaqeeyey imaanshaha madaxda Galmudug iyo Koonfur Galbeed taasoo qeyb ka ah ololaha lagu doonayo in dowlad goboleedyada lagu hoos keeno maamulkiisa.
Dowladda federaalka ayaa awoodi weyday inay saameyn isku mid ah ku yeelato doorashooyinka Puntland iyo Jubbaland, oo madaxdooda tan iyo markaas ay ka shaqeynayeen in Farmaajo aan dib loo dooran. Iyaga oo u arka in jiritaankooda siyaasadeed uu ku xidhan yahay taas.
Heshiiskii 17-kii September
Qorshayaashii guud ayaa fashilmay kadib markii Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Qaranka (NIEC) ay u sheegeen baarlamaanka bishii Juun 2020 inay u baahan yihiin ilaa 13 bilood si ay isugu diyaariyaan doorashooyin lagu kalsoonaan karo.
Jubbaland, Puntland iyo xisbiyada mucaaradka ayaa diiday inay qayb ka noqdaan dib u dhaca ku yimid doorashada. Xilka qaadistii muranka badnayd ee lagu sameeyay Ra’iisul wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre bishii Luulyo 2020 ayaa sii yareysay kalsoonidii ay ku qabeen howlaha doorashada.
Hoggaamiyaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa diiday inay kaqeyb galaan shir madaxeed ku aaddan doorashada oo lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee bartamaha dalka, kaas oo horseeday heshiis horudhac ah oo ku saabsan doorashada. Hoggaamiyeyaashan ayaa dalbaday in la kala diro guddiga doorashada kaddib kolkii ay ku eedeeyeen eex.
Si kastaba ha noqotee, toddobaadyo ka dib cadaadis caalami ah, heshiis ku saabsan qaababka doorashooyinka ayaa la saxiixay 17 Sebtember 2020.
Sida ku cad heshiiska, doorashada waxay ku salaysnaan doontaa isku duubnaanta deegaanka, iyadoo ergo dooranaysaa ay ka codeynayaan degmo kasta, oo ka dhigan labo degmo oo ka tirsan dowlad-goboleed kasta in ay xaq u yeelanayaan.
Guddiyada doorashooyinka heer qaran iyo heer gobol ayaa loo dhisi lahaa inay kormeeraan doorashooyinka.
Dhaqan galinta heshiiskan ayaa noqotay mid aad u adag maadaama Madoobe iyo Deni ay diideen guddiga codbixinta ee ay dhistay dowlada federaalka. Waxay sidoo kale dalbadeen in xilalka laga qaado taliyeyaasha amniga lana kala diro baarlamaanka.
Baarlamaanka federaalku markii ay arkeen dib u dhaca doorashada waxay meel mariyeen qaraar bishii Noofambar 2020 taasoo u oggolaanaysa dhammaan hay’adaha dowladda inay sii joogaan xukunka illaa laga dooranayo kuwa beddeli doona.
Previous articleMaalinta Koobaad ee Shirka wadatashiga doorashooyinka oo la soo geba-gabeeyay
Next articleShirka Gollaha Wadatashiga Arrimaha Doorashooyinka oo Maalintii labaad galay